Kala Bixinta Mashiinka Dayactirka ee Lynnhaven, Daraasad Daraasad Oo Ku Saabsan Duulista
Degmadda Norfolk, VA, ee Ciidamada Mareykanka ee Ciidamada Qalabka Injineerku waxay cadeeyeen Lynnhaven Inlet Federal Navigation Channel inuu si buuxda u socon karo ka dib mashruuc dayactir $ 2 milyan oo doolar ah si looga saaro xaaladaha naxdinta leh ee sii xumeeyey Hurricane Sandy ee 2012.
Corps ayaa qandaraas la gashay shirkadda Southwind Construction Corporation, oo ku timid ka hor waqtigii loogu talo galay iyo miisaaniyad ahaan, ayuu yiri Andy Reid, wakiilka xafiiska qandaraaska degmada Norfolk. Southwind waxay isticmaashay 16 ″ Ellicott Series 970 cutter dredge, sawirka kore, si ay u qabtaan shaqada.
Qodista dayactirka ayaa sidoo kale soo bandhigtay dib-u-adeegsi waxtar leh iyo meeleyn qiyaastii 112,000 dhudhun dhudhun oo ciid ah oo dhererkeedu yahay 6,500 fuudh oo xeebta ah, laga bilaabo Lynnhaven Inlet ilaa xaafad u dhow oo ku teedsan xeebta 'Chic's Beach' ee ku taal Virginia Beach, VA, oo u dhow afka Chesapeake Bay. “Magaalada Virginia Beach aad ayey ugu qanacsan tahay waxqabadka degmada Norfolk ee qandaraaskan,” ayuu yiri Phill Roehrs, PE, injineerka kheyraadka biyaha ee Virginia Beach. “Marin-biyoodka muhiimka ah ee u adeega berkedda ayaa laga nadiifiyey dhammaan wixii duug ahaa, ciiddii laga saarayna kanaalka ayaa la saaray mid ka mid ah xeebaheenna nabaad-guurka ah si loo buuxiyo. Waa kan ugu fiican labada adduun. ”
Lynnhaven Inlet sanadkiiba mar waxaa lagu sameeyaa qodista dayactirka si loola dagaallamo xatooyada muhiimka ah. Si kastaba ha noqotee, saameynta Hurricane Sandy ay ku yeelatay xeebta Virginia Beach, xaaladaha shooga ayaa ka sii daray waxayna u baahan yihiin qashin qoto dheereeya, ayuu yiri Kristin Mazur, oo ah maamulaha mashruuca Degmada Norfolk.
"Daraasaduhu waxay cadeeyeen in si xawli ah looga dhex socdo marinka laga soo galo, iyadoo loo rogayo webiga iyo dariiqyada dhinaca mashruuca," ayuu yiri Mazur. Jug-juggan, haddii keligiis laga tago, wuxuu saameyn ku yeelan lahaa noocyo badan oo ka mid ah warshadaha badda, wuxuuna khatar gelin lahaa hagitaan ammaan ah oo hufan.
Mashruucu caadi ahaan wuxuu u baahan yahay dayactir buuxa wareegood qiyaastii seddexdii sanaba hal mar, isagoo fursad u siinaya marinka Chesapeake Bay iyo Badweynta Atlantikada ee maraakiibta kalluumaysiga ganacsi, doomaha kalluumeysiga ee kalluumeysiga, doonyaha madaxa iyo tiro badan oo ah maraakiibta madadaalada. Kanaalka waxaa loo adeegsadaa doomaha tijaabada ee labadaba saldhigyada duulimaadyada ee Virginia iyo Maryland oo ku saleysan gudaha gudaha si ay duuliyayaashu uga soo qaadaan doomahooda ilaa maraakiibta-qoto-dheer ee soo galaya Chesapeake Bay ee Atlanta.